Shiinaha 175ml udugga dhalada saliida baahisa saliida lagama maarmaanka u ah qeybiye logo logo iyo soo saaraha | Kingtone
175ml udugga dhalada diffuser saliida lagama maarmaanka u ah logo caadadii
Lambarka Moodalka: 10026-175
Magaca badeecada: caraf udgoon caraf udgoon faafiye
Xardho caraf udgoon caraf udgoon caraf dhalada dhalada galaas saliida udgoon
[Xakamaynta urta fudud iyo muddo-dheer] U ogolow booskaagu inuu ur fiican yahay, carafkuna si fudud kuma baabi'i doono. Waad dooran kartaa inaad ku darto ama ka saarto tirada cawsduurrada sida aad u kala jeceshahay. Markuu udgoonku daciifayo, usha dusha uun ka rog ama ku beddel mid cusub. Dhalo kasta oo caano ah oo aan lahayn aalkolo ayaa udgoonka si tartiib ah oo siman hawada ugu sii deysa ilaa 40 maalmood
[Qurxi gurigaaga] Dhalada quraaradaha fiiqan ee dhalada ah ayaa lagu waafajin karaa wixii qurxin ah. Dhalooyinka quraaradaha madhan dib ayaa loogu isticmaali karaa DIY. Aad ugu habboon qurxinta guryaha iyo xafiisyada. Ku habboon qolka jiifka, musqusha, qolka fadhiga, qolka cuntada, qolka barashada, jikada, iwm.
Gifts Hadiyado hadiyadeed】 (1) 3 dhalo oo dhalo ah oo ay ka buuxaan saliid kaladuwan. (2) 18 ulaha baahinta saliida. (3) Sanduuq hadiyad casri ah oo kooban. Sanduuqa kuma yaallo wax tilmaam ah, waxayna ku habboon tahay munaasabad kasta oo u baahan dhalasho, aroos, maalinta hooyada, maalinta aabbaha, Kirismas, gaadiid ama hadiyado. U adeegso faafiyahayaga caws si aad ugu farxad geliso waalidiintaada, asxaabtaada, asxaabtaada iyo macaamiishaada
Hore: Dhalada Qurxinta Dhalada Diffuser Muhiimka ah Dhalada Saliida Muhiimka ah
Xiga: Dhalooyinka diffuser-ka muraayadaha muraayada ah ee qurxinta leh